Fanontaniana iray monja
fanontaniana Fanontaniana iray monja
Misaotra anareo nandray: 44
2 taona 1 herinandro lasa izay #360 by Dariussssss
Ity iray ity dia tokony ho tena fanontaniana tsotra ... na tsy mety. Aho mpankafy ny Airbus, Ekeko izany. Ary satria no nihaonako voalohany tamin'ny fiaramanidina Sims, izay mpanamboatra fiaramanidina no tiako indrindra. Noho izany, ao amin'ny FGFS, FS2004 ary ankehitriny in FSX, zara raha misy zavatra tsara sy azo antoka fiaramanidina Airbus. Misy payware fiaramanidina fotsiny aho fa tsy afaka azy.
Ny fanontaniana dia izao: Ahoana ny roa hafa Sims, X-Plane sy P3D, misy freeware Airbus miasa tanteraka na inona na inona amin'izy ireo?
Ny tena olana aho amin'ny fiaramanidina Airbus, indrindra Thomas Ruth A330 / 340 sy PA A380 in FSX dia ny hoe tsy ampy PFD zavatra tsotra iray. IAS scotch tsy mampiseho na overspeed sy ny fihinanam-bilona, ​​ary ny fiaramanidina tsy dia tena mampivarahontsana izany. Tsy misy fomba manidina azy io araka ny tokony ho. Nandritra ny volana maromaro aho miezaka mba hahazo fanampiana tamin'io fa tsy misy olona, ​​eo amin'ny fiaraha-monina iray manontolo FSX te hanampy ahy.
A320 multi-fanamian'ny entana, azo jerena eto amin'ny Rikoooo dia mahafinaritra, sy izay rehetra tiako dia ny hamindra ny zavatra sasany, toy ny PFD ny voalaza fiaramanidina, na amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny TR A330. Nanontaniana na aiza na aiza ny fomba hanaovana izany ... ary very maina fotsiny ny fotoanako.
Going niverina tany FGFS tena ny safidy farany ary Izaho kosa faly hanao izany, raha tsy misy safidy hafa.
Misaotra anareo nandray: 18
2 taona 1 herinandro lasa izay #367 by Gh0stRider203
RAHA Izany dia midika hoe tsy mampiseho azy io, dia mety ho afaka hanova ny aircraft.cfg rakitra ny manamboatra izany. Aho, raha ny marina tsy maintsy hanao izany ny CLS DC-10-30F. Shorted izy ireo anao momba 4.5K litatra ny solika, ka nampidina ny lehibe lanjan'ny Max tsara izany ambany ny zavatra tena nisy.
mpivady tweaks ny aircraft.cfg rakitra ary izany no tokony ho izy. ankehitriny dia afaka manidina isan-karazany Max-sidina tsy misy olana
Tompon'ny / CEO
2 taona 1 herinandro lasa izay #369 by Dariussssss
Tsy mampiseho izany fotsiny, ary amin'ny cfg rakitra, amin'ny fihinanam-bilona hafainganam-pandeha tanteraka mampino ... 120 kts? Jereo fotsiny ny sasany ka vao cockpit lahatsary amin'ny YT sy hahita fa ny tena eo 155 sy 160, ka amin'ny 120 ... dia hiafara ao amin'ny vaovao.
Eo no hizahako toetra izany, azo antoka.
2 taona 1 herinandro lasa izay #371 by Gh0stRider203
Iany aho ho manana Jereo ny Dash-cfg 8 ny rakitra ary ho azo antoka fa tsara sucker no setup cuz aho na dia tsy mahazo manakaiky ny Max isan-karazany tamin'izany sucker ary izany no tsy tena manampy misy LOL
Tsy afaka manana solika voafetra ny rehefa manidina sy ny refueling tapaky ny rivotra dia tsy nankasitraka ny.
2 taona 1 herinandro lasa izay #372 by Dariussssss
Fiaramanidina mpandraharaha dia S ... h antsika ....
2 taona 1 herinandro lasa izay - 2 taona 1 herinandro lasa izay #373 by Gh0stRider203
Tsara vintana mahazo Ahy mba hiady hevitra aminareo fa ny anankiray tamin'ny LMAO
Ya mahafantatra ny aminy Te ho tsara raha toa ny olona manao ireo fiaramanidina ho Flight Sim izy ireo raha ny marina ny sasany f'in 'fikarohana aloha ya mahalala ???? >.>
Mino aho fa handeha aho handoro sasany lavaka eny amin'ny lanitra amin'ny mạch 2 ao amin'ny Concorde. FAMPANANTENAN'ANDRIAMANITRA IZY NO Tsy tilikambo Buzz vitsivitsy teny an-dalana LOL
Fanovana farany: 2 taona 1 herinandro lasa izay Gh0stRider203.
2 taona 1 herinandro lasa izay #386 by Dariussssss
Heveriko fa, ho an'ireo mpandraharaha, dia ho ampy ny miresaka fotsiny ho an'izao tontolo izao ny tena mpitondra sambonao.
Momba ny olana ... A340 PFD tsara fa mora ny manova toetra sasany tao amin'ny fiaramanidina .cfg rakitra, fa manova na inona na inona. Ny PFD tsy mampiseho na overspeed sy ny fihinanam-bilona., Ka heveriko tsara aho. Izany dia tokony hovana any ho any ao amin'ny VC na tontonana antontan-taratasy ary tsy Vakio ny fomba hanaovana izany.
Dia tena very saina aho noho izany, izay raha ny marina nametraka FGFS sy A346 ... na dia ratsy kokoa diso fanantenana, na dia tsy afaka manomboka izany teo, dia niverina tany FSX, ary miady mafy mba manamboatra fa PFD.
2 taona 1 herinandro lasa izay #387 by Colonelwing
raha diso fanantenana tolona ,, fotoana ,,, misy zavatra tsara momba izany rehetra izany ,,, izay ianaranao.
Ny tsy mora foana ny mianatra eto amin'ity fiainana ity ,, ,, Ekeko fa amin'ny lease ny miezaka mafy mba hamaha ny olana,
ary izany dia ny lalana tari-dalana ho amin'ny fotoana ho avy succesful ...
2 taona 1 herinandro lasa izay #389 by Dariussssss
Hey Colonelwing, inona ny?
Eny ary, tsy miasa amiko toy izany, fara fahakeliny, tsy tamin'ny Air Sims. Raha misy zavatra tsy mandeha dia mandeha mivantana any amin'ny fako pako. Tsy te-handany fotoana rehetra sy ny hozatra eo aminy.
Eo amin'ny fiainana tena izy, miombon-kevitra hahatonga ny fiainako manontolo dia ady, fa tantara hafa izany, fa tsy ho amin'ity tany ity.
2 taona 1 herinandro lasa izay #392 by Gh0stRider203
tsara, ianareo rehetra ve tsy maintsy atao dia mijery Wikipedia raha ny fiaramanidina Info, ny marina amin'ny kely indrindra ... ho an'ny ara-barotra.
Fotoana mamorona pejy: 0.532 segondra